12 एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप > 12 एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा पोर्तुगल, ट्रेन यात्रा स्कटल्याण्ड, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 17/12/2021)
माया फुल्ने एउटा उत्तम तरिका भनेको केहि समय एक्लै बिताउनु हो, केवल तपाईं दुई, र पुन: जडान गर्नुहोस्. आधुनिक जीवन धेरै व्यस्त र व्यस्त छ, यो जादुई र विशेष जडान तपाईं पृष्ठभूमिमा हराउन दिन सजिलो छ. त्यसैले, हामीले केहि सबैभन्दा एकान्त स्थानहरू भेला गरेका छौं, द 12 एकान्त प्रेमीहरूको लागि स्पार्क्स र आगो पुन: जगाउनको लागि उत्तम ठाउँहरू.
पाइन रूखहरू मुनि, तपाईंको ट्रीहाउसबाट समुद्रलाई हेर्दै, तपाईंले यी भव्य ठाउँहरू सबैभन्दा लुकाउने ठाउँहरूमा पाउनुहुनेछ.
1. एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू: स्कटल्याण्ड
रमणीय हरियाली पहाडहरू, विशाल जमिन, र पहाडहरू जहाँ तपाईं अटलान्टिक महासागरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ. स्कटिश प्राकृतिक परिदृश्य संसारको सबैभन्दा महाकाव्य दृश्यहरू मध्ये एक हो. पैदल यात्रा को बीचमा, आफ्नो भ्यान मा लुकेर, वा प्यारा सानो केबिन, आइल अफ स्काई मध्ये एक हो most wanted couple’s trips destinations.
यसबाहेक, आइल अफ स्काई यसको लुकाउने टापुहरूको लागि प्रसिद्ध छ, पोखरी, र परी जस्तै स्पटहरू. त्यसैले, तपाईं सजिलै वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ, र सँगै उत्कृष्ट आउटडोर अन्वेषण गर्नुहोस्. आइल अफ स्काईमा रहेको रहस्यवादी लगभग ईश्वरीय दृश्यमा एकान्त प्रेमीहरूको लागि प्रशस्त रोमान्टिक ठाउँहरू छन्।, त्यसैले तपाईले जिज्ञासु यात्रुहरूबाट बाधा पर्ने बारे चिन्ता गर्नुपर्दैन र सँगै उत्कृष्ट रोमान्टिक गुणस्तर समय बिताउन सक्नुहुन्छ।.
इन्डोनेसियामा जंगली र अटम प्रकृति संसारको सबैभन्दा रोमान्टिक सेटिङहरू मध्ये एकको रूपमा चिनिन्छ।. यसबाहेक, द प्रकृति भण्डार इन्डोनेसियामा अनगिन्ती झरनाहरू छन्, प्राकृतिक पोखरीहरू, र अचम्म लाग्छ कि मायामा परेको मान्छेले केहि समयको लागि संसारबाट टाढा लुक्न सक्छ.
यद्यपि, यदि तिमी लुकाउने दृश्यहरू रुचाउँछन् भारतीय र प्रशान्त महासागरको, त्यसपछि एकान्त निजी ट्रीहाउसमा बस्नु उत्तम हुनेछ. इन्डोनेसिया यसको भव्यताका लागि प्रसिद्ध छ पर्यावरण मैत्री छुट्टी accommodations. काठको केबिनहरू, रूख घरहरू, र विलाहरू इन्डोनेसियामा सबैभन्दा रोमान्टिक छुट्टी भाडा हो. बालीमा, Ubud, समुद्र वा जंगल दृश्य संग, इन्डोनेसिया शीर्ष मध्ये एक हो5एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू.
3. एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू: रगत, स्लोभेनिया
पहाडको बिचमा तालको दृश्यमा उठ्दै, लेक ब्लेड स्लोभेनियामा एक जोडीको गेटवेको लागि आकर्षक गन्तव्य हो. जुलियन आल्प्स मा सेट गर्नुहोस्, वरिपरि जंगल संग, प्रसिद्ध Bled महल, र एउटा टापु जहाँ तपाईं पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ, ब्लेड ताल अत्यन्त रोमान्टिक छ. रूखहरू र वरपरका पहाडहरू प्रतिबिम्बित फिरोजा पानीले दुईको लागि बिहानको खाजाको लागि एक अद्वितीय र शान्त वातावरण सिर्जना गर्दछ।.
यसबाहेक, धेरै को लेक ब्लेडमा छुट्टी भाडा एक निजी किनार संग आउनुहोस्, सीधा आफ्नो निजी केबिन बाट. त्यसैले, यद्यपि लेक ब्लेड स्लोभेनियामा एक लोकप्रिय छुट्टी गन्तव्य हो, तपाइँ निश्चित रूपमा तपाइँको एकान्त गेटवे को लागी स्वर्ग को एक सानो टुक्रा पाउन सक्नुहुन्छ.
4. फ्रेन्च आल्प्स
आल्प्सको गहिरो हिउँ परेको रातमा आगोले अँगालो हाल्नु संसारको सबैभन्दा रोमान्टिक चीजहरू मध्ये एक हो।. जाडोमा फ्रान्सेली अल्पाइन पहाडहरू सबै हिउँले ढाकेका हुन्छन्, जाडोको घमाइलो बिहानमा घाममा चम्किरहेको. हावा कुरकुरा र ताजा छ, कालो कफी को एक चुस्की संग तपाईं ढलान तल आफ्नो दिन सुरु गर्नु अघि उत्साहित.
रातमा दृश्यहरू विशेष गरी आल्प्समा गहिरो रोमान्टिक हुन्छन् जब ताराहरू बाहिर आउँछन्, र माइलमा मात्र प्रकाश तपाईको ग्ल्याम्पिंग पोडबाट आउँछ. यदि तपाईंलाई थाहा छैन भने रोन-आल्प्स सबैभन्दा धेरै मध्ये एक हो रोमान्टिक glamping फ्रान्सको रोन-आल्प्समा. एकान्त, घनिष्ठ, शानदार, र अद्वितीय, रोमान्स र एकान्तको लागि उत्तम.
5. एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू: Piedmont इटाली
युरोप मा एक रोमान्टिक गेटवे को लागी अर्को भयानक गन्तव्य इटाली मा Piedmont छ. द सुन्दर रक्सी क्षेत्र फ्रान्स र स्विट्जरल्याण्ड बीच स्थित छ, आल्प्सको फेदमा. Piedmont Val di Susa को उपत्यकाहरूमा एकान्त प्रेमीहरूको लागि सबैभन्दा सुन्दर भाडाको घर हो।.
वाइन स्वादको अतिरिक्त, तपाईं रोमान्टिक पदयात्रा मा जान सक्नुहुन्छ, र रोमान्टिक पिकनिक संग समाप्त. सँगै समय बिताउने अर्को उत्कृष्ट तरिका भ्रमण गर्नु हो मध्ययुगीन महल, र Piedmont केही अद्भुत महलहरू छन्. त्यसैले, Piedmont इटाली मा एक जोडी को रिट्रीट को लागी एक शानदार स्थान हो.
एक ट्रेन संग ट्युरिन देखि मिलान
ताल कोमो एक ट्रेन संग टुरिन
जेनोवा देखि टुरिन एक ट्रेन संग
पर्मा टुरिन एक ट्रेन संग
6. ला सेज स्विजरल्याण्ड
Chamonix देखि Zermatt सम्म, ला सेज टू ले प्रिलेट, वा अरोला, मध्ये तीन छन् प्रसिद्ध पैदल यात्रा ट्रेल्स ला सेज मा. ट्रेलहरू धेरै लामो छन्, तर दृश्यहरू महाकाव्य र तपाईंको सबै प्रयासको लायक छन्. यसबाहेक, तपाईंले बाटोमा सामना गर्नुहुने दृश्यहरू संसारका केही सुन्दर छन्.
किनभने यी पदमार्गहरू धेरै लामो छन्, तपाईंसँग पछाडि बस्नको लागि प्रशस्त ठाउँहरू हुनेछन्, आराम गर्नुहोस्, र आफैमा भव्य प्रकृति छ. पर्यटकहरूको भीड धेरै पछाडि हुनेछ, र यो केवल तपाईं हुनेछ, आकाश, हरियो घास, तलका उपत्यकाहरू, र तपाइँको छेउमा तपाइँको प्रियजन. सँगै रोमान्टिक र एकान्त समयको लागि स्विट्जरल्याण्डमा कुनै राम्रो ठाउँ छैन.
7. एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू: टस्क्यानी इटाली
रक्सी, इटालियन विलाहरू, र मनमोहक साना शहरहरू बीच सयौं माइल, एकान्त प्रेमीहरूको लागि रोमान्टिक गेटवेको रूपमा Tuscany लाई केहि पनि शीर्ष गर्न सक्दैन. पोस्टकार्ड-जस्तो दृश्यले कुनै पनि मुटुको धड्कनलाई अचम्मको साथ छिटो बनाउँछ र जादुई वातावरणमा थप्छ।. जब तपाईं दुई टस्कनी पुग्नुहुन्छ, तिमीले आफैलाई पूर्ण रूपमा गुमाउनेछौ र सबै समस्याहरूलाई पछाडि छोड्नेछौ.
Monticchiello, उदाहरण को लागी, पन्ध्र शताब्दीको गाउँ, Tuscany मा एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हो. तपाईं यो पुरानो गाउँ वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ, चुम्बन विनिमय, यसको पर्खाल भित्र, ढुङ्गा मार्गहरू र टस्कनीको हरियो पहाडहरूको दृश्यहरूको प्रशंसा गर्नुहोस्.
8. कालो वन जर्मनी
घना, दक्षिणपश्चिम जर्मनीमा सदाबहार ब्ल्याक फरेस्ट यति विशाल छ कि कुनै पनि जोडी पूर्ण रूपमा राडारबाट बाहिर जान सक्छ।. पैदल यात्रा देखि आराम गर्न को लागी, द ब्ल्याक फरेस्ट जोडीको रिट्रीटको लागि अचम्मको गन्तव्य हो. उदाहरणका लागि, यदि तपाईं बाहिरी माया गर्ने जोडी हुनुहुन्छ भने, तपाईंले ब्ल्याक फरेस्टमा धेरै उत्कृष्ट पदयात्रा ट्रेल्स पाउन सक्नुहुन्छ, ट्राइबर्ग झरनाको बाटो जस्तै, र सायद नजिकै पिकनिक छ.
वैकल्पिक, तपाईं विलासी स्पामा आरामदायी समयको लागि बाडेन-बाडेन जान सक्नुहुन्छ वा आफ्नो निजी बाहिरी हट टबमा बसेर आराम गर्न सक्नुहुन्छ।. या त बाटो, कालो जंगलमा यात्रा गर्दै जादुई क्षणहरूको लागि प्रतिज्ञा हुनेछ, युरोपमा एकान्त प्रेमीहरूको लागि.
अफेनबर्ग देखि फ्राइबर्ग एक ट्रेन संग
Stuttgart देखि Freiburg एक ट्रेन संग
Leipzig देखि Freiburg एक ट्रेन संग
नुरेम्बर्ग देखि फ्रिबर्ग एक ट्रेन संग
9. एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू: उत्तरी आयरल्याण्डको उत्तरी तट
शानदार चट्टानहरू र भव्य दृश्यहरूको साथ, आयरल्याण्डको उत्तरी तट बेलायतको सबैभन्दा प्रभावशाली क्षेत्रहरू मध्ये एक हो. उत्तरी आयरल्याण्डमा विचित्र साना समुद्री किनारका शहरहरू थिए, सानो आकर्षक कुटेज संग, र एउटा ट्रेल जुन सीधा समुद्रको दृश्यमा जान्छ. त्यसैले, त्यहाँ सूर्यास्त हेर्न वा किनारमा हिंड्न पर्याप्त रोमान्टिक एकान्त ठाउँहरू छन्.
उदाहरण को रुपमा, Ballintoy बन्दरगाह एक चट्टानी परिदृश्य र रोमान्टिक पदयात्रा र पिकनिक को लागि किनार छ. अर्को धेरै रोमान्टिक ठाउँ विशाल कोजवे हो, तपाइँको महत्वपूर्ण अन्य संग अन्वेषण गर्न को लागी एक अद्वितीय स्थान. आयरल्याण्डको उत्तरी तट एकान्त प्रेमीहरूको लागि एक सुन्दर छुट्टी ठाउँ हो.
10. फर्डी माउन्टेन अस्ट्रिया
आकर्षक Enns उपत्यका र Dachstein पर्वत श्रृंखला बीच, फ्रेडी माउन्टेन एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँ हो. बाक्लो पाइन रूखहरू, तपाईंको अगाडि नाटकीय शिखरहरू, र चारैतिर शान्ति, फ्रेडी माउन्टेनले रोमान्टिक गेटवेको लागि उत्तम सेटिंग सिर्जना गर्दछ.
यसबाहेक, यो एकान्त क्षेत्र केहि सबैभन्दा रोमान्टिक घर-बाट-घर-बाट-घर लजहरूको घर हो।. एक निजी सौना संग, टेरेस, र अस्ट्रियन पहाडहरूको विशेष दृश्य, फ्रेडी माउन्टेन एक हो 12 सबै भन्दा राम्रो प्रेम गन्तव्यहरू, केहि जादुई गुणस्तर समय को लागी. वास्तबमा, फ्रेडी धेरै टाढा छ, त्यहाँ पुग्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका कार द्वारा हो किनभने त्यहाँ छैन सार्वजनिक यातायात अस्ट्रियन पहाडहरूमा यो विशेष स्थानमा.
11. एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू: Algarve पोर्चुगल
बलौटे तटहरू, नाटकीय कोभहरू, फिरोजा पानी, र सूर्यले तपाईंको अनुहार चुम्बन गर्दै, Algarve भन्दा सपना देख्ने ठाउँ छैन. Ponta Da Piedade यसको तहखानेहरू सहित, चट्टानहरु, पिरोजा पानीको बिरूद्ध मह टोनमा आर्चहरू संसारको सबैभन्दा लुभावनी छविहरू मध्ये एक हो।, र सबैभन्दा रोमान्टिक मध्ये एक. हराउनको लागि अर्को अद्भुत समुद्र तट Praia da Rocha हो. एकान्त, शान्त, सुन्दर, र तपाईंको प्रेम पक्षीहरू वरिपरि घुम्नको लागि उत्तम, घामको स्नान, र आराम.
Algarve को प्राकृतिक रत्न एक आश्चर्यजनक गर्मी स्वर्ग हो. समुद्र तट र रातो कोभहरू समुद्र द्वारा रोमान्टिक रमाइलोको लागि उपयुक्त छन्. सूर्यास्तमा हेरे, पानीमा हाम फाल्ने, वा एक गिलास वाइन खानुहोस्, एल्गार्वेमा रोमान्स हावामा छ. यो सबै शीर्षमा, यो एकान्त सौन्दर्य लागोसको नजिक छ, त्यसैले तपाईं जुनसुकै बेला भाग्न सक्नुहुन्छ.
12. Cotswolds इङ्गल्याण्ड
पाँच जिल्लामा फैलिएको छ, Cotswolds manors, र ढुङ्गाका पुलहरू समयमै जमेको जस्तो देखिन्छ. यो रमणीय क्षेत्र प्रिन्स अफ वेल्सको हाईग्रोभ एस्टेट र आकर्षक ढुङ्गाका घरहरूको घर हो. कसैले सोच्न सक्छ कि तिनीहरू समय मा फिर्ता यात्रा गरेका छन्, तपाईंको आफ्नै कुटीरको गोपनीयतामा. यसबाहेक, जहाँ उत्कृष्ट वास्तुकला छ, रोयलहरूको लागि उपयुक्त, राम्रा बगैंचाहरू बकिंघम प्यालेसमा रानीको बगैंचाभन्दा धेरै पछाडि पर्दैनन्.
त्यसैले, जबकि Cotswolds अलि टाढा छ, अंग्रेजी ग्रामीण इलाकामा एकान्त, यो एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँ हो. पैदल यात्रा बीच छनोट, र पनीर स्वाद, छुट्टीमा हुँदा गाह्रो हुन सक्छ, तर एउटा कुरा पक्का छ, Cotswolds इङ्गल्याण्ड मा एक धेरै रोमान्टिक गन्तव्य हो.
हामी मा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् तपाइँ यी को लागी एक यात्रा को योजना मा मद्दत गर्न खुशी हुनेछ 12 एकान्त प्रेमीहरूको लागि उत्तम ठाउँहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोस्ट "एकान्त प्रेमीहरूको लागि 12 उत्कृष्ट स्थानहरू" तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ?? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fbest-places-solitude-lovers%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)